Maresaka » Hisy "safo-drano" mahery vaika
26/02: Hisy "safo-drano" mahery vaika
Isaorana ny Anaran'ny Tompo fa lehibe ny faharetany ka tsy sasatra Izy miantso ny Malagasy hibebaka. Toy izao ny fahitana izay nasehony ny mpanompony mba hibebahan'ireo voaantso:
Satria milomano ao anatin'ny ota ny firenena dia ho diovin'Andriamanitra izany noho ny fitiavany ny olony. Tsy mihevitra loatra intsony ny olona fa "manara-drenirano" sy maka tahaka ny fanaovan-dratsy ataon'ny besinimaro sisa. Hisy "rano mahery vaika" handripaka ireo "mpanara-drenirano" ireo ka maro no ho ripany.
Hitsahatra izany mandritra ny fotoana fohy ka hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra ny olona sasany, ary Andriamanitra hiaro sy hanokana azy ireo.
Betsaka kosa anefa ireo tsy miova fo ka manararaotra ilay fitsaharana vetivety sy manohy "manara-drenirano" amin'ny fanaovana ota eo anatrehan'Andriamanitra. Hisy "rano mahery vaika" indray hitondra sy handripaka azy ireny ka tsy ho voavonjy intsony "ny ainy."
Ry malala, izay no voatantara tamin'ilay fahitana ka aoka ny manam-panahy hamantatra izay dikany. Aza ampitahaina amin'ny fiainan'olon-kafa ny fiainanao fa i Jesosy Kristy irery ihany no ataovy filamatra. Matokia Azy fa Izy no efa nanolotra ny ainy ho anao ary tsy hamela anao ho irery Izy.
Ho Azy anie ny voninahitra mandrakizay,